राजा नै दाहिना भएपछि के लाग्छ ? « Postpati – News For All
राजा नै दाहिना भएपछि के लाग्छ ?
पुरुषोत्तम लम्साल । निरपेक्षता पश्चिमा कन्स्पीरेसी मात्र हो वा नेपाली समाजको यथार्थ ? धर्मको नाममा शुरु भएको कोकोहोलो राजनीतिक फण्डा मात्र हो वा गम्भीर मुद्दा ? को झोले भए को दलाल ? को तलबी भए को बिचौलिया ? धर्मको नाममा राजनीतिको जागिर खाइरहेका अनुहारहरु कति छन् ?
गत हप्ता मात्र भारतको मेघालय उच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशले भारत हिन्दु राष्ट्र हुनपर्ने आशयको फैसला गरे । यो फैसलामा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डाबारे शुरु गरेको भनेको हस्ताक्षर अभियानको कुनै साइनो छैन । र, पोखराटन गर्न हिंडेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि कुनै साइनो छैन । साइनो छ त केवल नेपालमा बढ्दो धर्मको बहस र चर्चाको आयतनको ।
गताङ्कमा ‘क्यापुचीन टू युनिजफिकेसन’ शीर्षक लेखमा नेपालमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको धर्म र इसाई मिसिनरीबारे संक्षेपमा चर्चा थियो । २००७ सालदेखि धेरैले नेपालमा नयाँ राष्ट्रवाद उदाएको उद्घोष गरे । पञ्चायतलाई नेपाली माटो सुहाउँदो भनेर व्याख्या पनि भयो । धेरैले महेन्द्रलाई एक भाषा एक धर्मको पक्षपोषक भनेर आलोचनाको तुलोमा जोख्ने यत्न पनि गरे । सापेक्ष र निरपेक्षको बहस हुँदै गर्ला तर धर्म र धामिक आयातन र विस्तारको कसीमा उक्त लेखपछि केही सज्जनले देखाएको चासो उत्साहमूलक लागेर दोस्रो अंक लेख्ने जाँगर चल्यो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु र भारत अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त हुनुबीच एकाध वर्षको मात्र अन्तर छ । भारत बेलायतको उपनिवेश राज्यबाट १९४७ मा पुनः देश वा राष्ट्रको रुपमा देखियो बहूसंख्यक हिन्दूसहित । र, बहूसंख्यक मुस्लिमसहितको पाकिस्तान पनि विश्व मानचित्रमा राष्ट्रको रुपमा थपियो । सय वर्षअगाडिको अखण्ड भारत कसरी दुई चिरामा बाँडियो त्यसको कथा अलग्गै छ । तर उस्तै समयमा नेपालमा शुरु भएको राणा शासनको १०४ वर्ष भोगेको नेपाली समाजको तस्वीर २००७ पछि गतिशील त भयो तर प्रगतिशील भएन । र, धर्मको कसीमा यो तस्वीरमा धूमिल आकृति प्रशस्त देखिन्छन् ।
विषयवस्तु प्रवेश गरौं, यूनाइटेड मिसन टू नेपाल (यूएमएन) हुँदै तानसेन र काठमाण्डौमा ‘फाइनेस्ट एण्ड मोर्डन मिसिनरी मुभमेन्ट चलाउने हेतु’ मिसिनरी अस्पताल खोल्न आग्रह गर्ने तात्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सनातन धर्म रक्षाको पगरी गुथाउने अजासु प्रवृत्ति बुझिनसक्नु छ । ४६ वर्षअगाडि प्रकाशित यूएमएनको ग्रिटिंग्स फ्रम नेपाल हेर्ने हो भने पनि त्यतिबेला सरकारले येशुका नाममा जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सहमति जनाएको र चर्चहरुलाई बलियो बनाउन तालिम दिने कार्यक्रमहरुलाई समर्थन गरेको स्पष्ट देखिन्छ । २०१० सालमा पुतलीसडकमा र २०१३ सालमा ज्ञानेश्वरमा खोलिएको चर्च यही सहमतिको पहिलो प्रतिफल रहेछ भन्न नमान्ने कोही छ भने हात उठाऔं ।
पृष्ठभूमिमा २००८ सालको मन्त्रीमण्डलका सदस्य नरबहादुर गुरुंगले नेपालमा मिसिनरीको नाममा संस्था खोल्न लिएको दिएको पहलकदमी पनि रहेछ । स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति र सेवा चाहिएको बहानामा विशुद्ध धर्मभीरुहरुलाई मैदान खाली गर्ने परम्परा त्यहीबाट शुरु भएको हो । कास्कीको परेड मैदानमा खोलिएको साइनिंग अस्पताल यसैको एउटा असल उदाहरण हो ।
फरकफरक अध्ययनले भन्छन्, निःसन्देह त्यतिबेला अस्पतालहरुले जनसेवा गरेकै हुन्, राहत दिएकै हो, तर सँगै यशुगामीहरुको रणनीतिक योजनालाई दिशा पनि दिएकै हो जुन कुरा राज्यलाई थाहा थियो । तर, कमजोर आत्मबलले कुनै कदम चालिएन । जनशक्तिको नाममा बेलायत, जर्मनी र न्यूजिल्याण्डबाट आयात गरिएका धार्मिक अवतारहरुकै सम्बन्धका आधारमा त्यतिबेला अध्ययन छात्रवृत्ती लिने नेपाली महापुरुषहरुले आफूलाई योग्यताको कसीमा आज जसरी जाँच्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल फेलोसिपको नाममा नेपालबाट बिदेश अध्ययन गर्न जानेहरुको सूची पनि त सयौं छ । नेपालमा सूसमाचारको नाममा चार पाते, आठ पाते हाते पुस्तक बाँड्ने चलन यिनैले चलाएका त हुन् ।
पञ्चायतः मौन मिसिनरीको उर्वर काल
२०१७ सालमा एकदलीय व्यवस्था लागू नहुँदो हो त नेपालमा २०५० मै इसाईको संख्या जनसंख्याको आधा भइसक्ने देखिन्छ । तर, राजाको होइन स्थानीय प्रशासकले आफ्नो तजबीजी अधिकार प्रयोग गरी म्लेक्ष्य धर्म (उनीहरुकै भाषामा) विरुद्ध कडाई गर्दा मिसिनरीका धेरै मिसन अवरुद्ध भए । र, फेरि मिसिनरीहरु सीमा फर्कन थाले । यही अवरुद्ध बाटो खोल्न सहायक भयो पिसकोर । महोदयहरु ! तपाईहरु नै होइन पिसकोरलाई साम्राज्यवादीका विनावर्दीका सेनाको टुकडी बताउने ? अनि तपाईहरुकै राजा होइनन् लालमोहर लगाएर पिसकोरलाई आमन्त्रण गर्ने ? राजा महेन्द्रको असीम निगाहबाट शुरु भएको पिसकोरबारे के धारणा छ ? कि, फेरि पिसकोरको अन्तर्य, विधि र कार्यक्रमबारे यहाँ वृतान्त लगाउनपर्छ ? यूनाइटेड मिसन टू नेपाललाई काँधमा बोकेर कैलाश चाहार्ने तपाईका महाराजबारे हामीले केही भन्न मिल्दैन होला ।
अनि तपाईको आइकोन राजा कसरी हिन्दुवादी मात्र भए ? ‘इसाई विश्वासभन्दा बाहेकका सबै झुठा राजाहरु, युवराजहरु, राज्यहरु र संघसंस्थाहरु तथा सरकारहरु अवैधानिक रहेकाले तिनलाई समाप्त गर्ने’ कसम खाएर सपथ लिने जेसुयटहरुलाई लौ यो मैदान तिमीहरुको पनि हो भन्ने तिम्रा राजा कसरी हिन्दुका अवतार भए ? उनलाई खास्सा निरपेक्षधर्मी भन्न किन मिल्दैन ? कि राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने वाणी नै सुनेर मात्र मख्ख हुनपर्ने हो ? अथवा, राजालाई सातखत माफ हुन्छ भन्ने हो ? संविधान र मुलुकी ऐन महाराजहरुलाई देखाउन मात्र हो ? हो भने भैगो ।
पञ्चायतकालीन संविधानमा हिन्दु राज्यको फुँदा जोडिनु राजनीतिक तिकडम मात्र हो वा धर्मप्रतिको प्रेम र समर्पण त्यो त राजनीति हो भन्ने कुरा लुकाइएको मात्र हो। महेन्द्रको तेजोबध गर्नेहरुलो उज्याउने धर्मको फण्डा फगत आरोप मात्र हुन्, यथार्थमा महेन्द्रलाई अभिजात सत्ताको महत्वाकांक्षाबाहेक अरुमा चासो कम देखिन्छ। पञ्चायती व्यवस्थापूर्वको पृष्ठभूमिमा भएका उनका भ्रमणअघि र पछि न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचार र विचार केलाउनेले पनि धर्मप्रति महेन्द्रको आशक्ति थिएन भनेर थाहा पाउन सक्दछ।
उदाहरण हेर्नुहुन्छ ? २०२८ सम्म यूनाइटेड मिसन टु नेपाल नेपालमा इसाई अभियानसम्वद्ध दर्जनौं संस्थाको छाता संगठन बनिसकेको थियो । यसभित्र लेप्रोसी मिसन, रिजन एण्ड बियोण्डलगायतका मिसन थिए । आधा दर्जन चर्चहरुको अर्को संगठन थियो । र, यूएमएनको दावी थियो यशुको नाममा जनताको आवश्यकता पूर्ती गर्न सरकारले दिएको अनुमति नै अख्तियार हो । अनि त कर्णेल नरराज जबरासमेत पुतलीसडकमा चर्च किन नखोल्नु ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्थापना पनि त चर्च अभियानकै अर्को अंश थियो होइन ? शान्ताभवन अस्पताल कसको देनमा खुलेको हो ? ज्ञानी शाहको करबलमा खुलेको ज्ञानेश्वर चर्चको इतिहास पनि खोतल्ने ? पर्दैन । अर्थात् जहाँ जहाँ दरबारको आँखा र सहभागिता त्यहाँ त्यहाँ मिसिनरी अस्पताल, जहाँ मिसिनरी त्यहाँ चर्चको विस्तार, जहाँ जहाँ मिसिनरी शिक्षालय त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ चर्च । केही भन्नु छ ? भए स्वागत छ । केही भन्नु भए २०२८ सालको नयाँ शिक्षा पद्दतिबारे पनि खुराक बोकेर आउन विनम्र अनुरोध छ ।
नेपालमा जुनबेला राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थीरता देखिन्छ त्यही बेला मिसिनरीको अभियानले महत्वपूर्ण ईट थप्दै गएको दृष्टान्त छ । जस्तो २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई इसाई अभियानकर्ताहरु जागरणकालको रुपमा व्याख्या गर्दछन् । तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई धन्यवाद दिने यो समूह भन्छ ‘जनमत संग्रहको गोलमालमै नेपालमा क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टहरु खुले, युथ फर क्राइस्टको नाममा लगानी र सहभागिता दुबै अर्थमा ठूला र प्रभावकारी कामहरु भए ।’ उपत्यकामा हरेक ६ महिनामा चर्च निर्माण गर्न सहायक भूमिका खेलिदिने दरबारलाई उनीहरु धन्यवाद दिन्छन् ।
पाटनको एउटै चर्च (कोइनोनिया)ले नेपालमा आउँदो दुई वर्षभित्र पाँच सय चर्च निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने दावी गर्दछ । यो त्यही चर्च हो जुन पञ्चायतकालको जनमत संग्रहको राजनीतिक अस्थीरताबीच स्थापना भएको थियो । मिसन ट्वान्टी ट्वान्टी बोकेर हिंडिरहेको काइनोनिया भन्छ, सबै राजाका आँखामा फुलो पर्नु संयोग मात्र कहाँ हुन्छ ?
पञ्चायतको उत्तरार्धमा स्थानीय प्रशासकहरुले चर्चहरुलाई मागि खाने भाँडो बनाउन थाले । पञ्चायतको भविश्य नदेखेका उनीहरुले कमाउ धन्दा पूरा नभएपछि चर्च, पादरी र पास्टरहरुलाई दुःख दिन थाले पनि भनिन्छ । यसबाट केही मण्डली गुमनाम भए । केही नागार्जुन हिंडे र समूहसमूह बनाएर बिदेशी दानको फुर्मास गर्न थाले । धन्न इतिहासकार तथा उपन्यासकार डायमन शमसेर राणाले ओत लाग्ने घर दिए र पञ्चहरुको लौरीकाण्डमा पनि मण्डलीहरुले ओत र शितल दुबै प्राप्त गर्न सके ।
२०४६ सालसम्म नेपालमा वाप्टाइज्ड भएका (बप्तिस्मा गरेका) दर्तावाल इसाई धर्मावलम्वीको संख्या ४० हजार पुगनपुग रहेछ । नेपालमा क्रिस्चियानिटीको विषयमा ओरल रबर्टस् यूनिभर्सिटीका लागि स्नातक तहको शोध हुँदै विद्यावारिधीसम्म गरेर नेपाल मामिलामा दर्जनौं प्रतिवेदन तयार गरेकी सिन्डी एल. पेरी (नेपाल चर्च सर्भेक्षण परियोजनाको परामर्शदाता हुँदै डेभलपमेन्ट एसोसियट इन्टरनेशनल दक्षिण एसिया निर्देशक)ले सन् १९८० देखि १९९० सम्म दश वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले यही भन्छ ।
संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था अलग थिए तर व्यवहारमा समभाव र सहिष्णुता आज जस्तो छ हिजो पनि त्यस्तै थियो । ‘मिसिनरी र चलखेल नाममा जब विवाद र बहस सुरु हुन्थे त्यतिबेला विद्यमान वा निर्मित संरचनालाई स्वायत्तता दिइएपछि’ सल्टिएका दर्जनौं सन्दर्भ भेटिन्छन् । पञ्चायतकालमै बुद्धिमान तामांगहरुले धादिंग जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका समुदायमा आम धर्मपरिवर्तनलाई पुर्याएको सहयोग पनि यहाँ छुटाउन हुँदैन । यसलाई धार्मिक जीतको रुपमा गरिएका व्याख्याहरु जहाँकहीं पाइन्छन् । ‘अवकाशप्राप्त बेलायत र गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारहरुले अंगालेको धर्म परिवर्तनले आर्थिक रुपमा सम्पन्न बर्ग र देखासिखी गर्ने बर्ग र विपन्नताको शीकार उत्पीडित बर्ग धर्म परिवर्तनमा उत्प्रेरित भएको बिवरण’ पनि बहुदलकालभन्दा अगाडिकै समयमा बढी पाइन्छ । यसबाट देशका पहाडी भूगोलमा छरिएर रहेका इसाई आस्थावान समुदायको लेखाजोखा राख्ने फुर्सद न हिजो थियो न आज छ ।
उदाहरणकै लागि तीन सय भन्दा बढी सम्मिलित पहिलो महिला विश्वासी सम्मेलन (२०४०) लिन सकिन्छ । अर्थात् नेपालमा इसाई मुभमेन्ट मात्रात्मक रुपमा आज बढी होला तर गुणात्मक रुपमा पञ्चायतकालमा बढी देख्न सकिन्छ । हो, यहींनेर खुस्किन्छ राष्ट्रवादको धोती । महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई एउटा बर्ग ओखती र अर्को बर्ग वीषको रुपमा बुझछ । तर दुबैको कुरा म बुझ्दिन ।
निरपेक्षता पश्चिमा कन्स्पीरेसी मात्र हो वा नेपाली समाजको यथार्थ ? धर्मको नाममा शुरु भएको कोकोहोलो राजनीतिक फण्डा मात्र हो वा गम्भीर मुद्दा ? को झोले भए को दलाल ? को तलबी भए को बिचौलिया ? धर्मको नाममा राजनीतिको जागिर खाइरहेका अनुहारहरु कति छन् ? २०४६ सालपछिको इसार्ई वृस्तितीकरणबारे पछि अंकमा चर्चा गरौंला ।